June 2018 - Ceelhuur Online
Jaamacadda Geeska Afrika oo Kulan Wacyigalin ah u qabatay Ardayda Cadaado (Sawirro)
June 30, 2018 admin300
Jaamacadda Geeska Afrika xarunteeda Magaalada Cadaado ayaa kulan wacyigalin ah u qabtay ardayda dhameysay dugsiyada Sare ee ku nool magaalada Cadaado. Madasha ayaa waxaa kasoo qeybgalay Masuuliyiin jaamcadda, arday iyo marti sharaf. waxaana qaar ka mid ah Macalimiinta ardayda u sharaxeen habka doorashada kuliyada jaamacadda, iyo qeybaha ay ka heli karaan jaamacadda Geeska Afrika xarunteeda […]
June 30, 2018 June 30, 2018 admin313
June 30, 2018 admin539
Kooxda Daacish ayaa sheegtay inay weeraro ka geystaan gudaha Somalia, ayaa waxay Wakaalladda Wararka u faafisa ee AMAQ NEWS AGENCY soo bandhigeen Muuqaal Video ah oo muujinaya iyadoo 2 shaqaale ka tirsan Shaqaalaha Maaliyadda oo lagu dhex dilayo gudaha magaalladda Muqdisho. Muuqaalka Video-ga waxa uu muujiyey Nin hubeysan oo la shegay inuu ka tirsan Kooxda […]
June 30, 2018 June 30, 2018 admin403
ILMADII SAMIIRA AARGADII DAYNIILE (XAQU HADUU QARAAR YAHAY SOOW QOTAMI MAAHA) Waxaa Qoray .Cawil Dahir Samiira iyo C/weli waxay AQALGALEEN 16kii bishii Maarso ee isla sanadkan 2018, waa maalintii farxadooda ee lamanuhu ay qoys ku midoobeen, 3 June ee 2018 waa maalintii murugadooda,oo qoyskoodii uu kala dhantaalmay oo uu burburay kadib markii mid ka mid […]
June 30, 2018 admin211
Kooxo hubeysan ayaa xalay degaanka Ceelasha Biyaha ee Duleedka Magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen wiil dhalinyaro ah sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka. Wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Daahir Xasan, waxaana uu ka mid ahaa dhalinyaradda kunool degaanka Ceelasha Biyaha. Kooxo hubeysan ayaa toogtay Cabdirashiid Daahir oo kasoo baxay dukaan ku yaalla […]
June 29, 2018 admin230
Shirka Madasha shanaad ee ay ku mideysanyihiin Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir oo looga doodi doono qodobo badan ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirka oo socon doona muddo labo maalin ah ayaa Wasaaradaha iyo Gobolka Banaadir ku soo bandhigi doonaan horumarka seddexdii bilood ee la soo […]
Faafaahin: Siideynta C/Kariin Qalbi Dhagax
June 29, 2018 admin415
Dowladda Itoobiya ayaa maanta sii deysay sarkaalka ONLF Sare oo ka tirsan ee lagu magacaabo C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax) sida uu Warbaahinta u xaqiijiyey Suldaan Fowsi Maxamed Cali. Ilo xog-ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyey in maanta oo Khamiis ah 8 am subaxnimo la sii daayey Qalbidhagax. Mid ka mid ah ehelada sarkaalkan ayaa sheegay in […]
June 28, 2018 admin240
Kulan gaar ah ayaa wuxuu magaaladda Nairobi ee xarunta dalka Kenya ku dhexmaray Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Guddoomiyaha Aqalka senate-ka Kenya Senator Kennedy Lusaka. Guddoomiye Cabdi Xaashi, ayaa dhiggiisa kaga mahad celiyay dowladda Kenya kaalmada iyo garab istaagga walaalahooda Soomaaliya gaar ahaan xilliyadii adkaa ee dalku ku jiray, […]
June 27, 2018 admin411
Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole ayaa magaalada Nairobi kaga qeybgalay shir looga hadlayey Horumarinta iyo Qorsheynta Koboca Magaalooyinka waaweyn Soomaaliya. Shirkan oo socday laba maalmood ayaa waxaa kasoo qeybgalay Mayor-da caasimada Dowlad goboleedyada, Maamulka Gobolka Banaadir, Wasaaradaha Arimaha Gudaha maamuladada, Hay’adaha iyo dowlaha daneeya Soomaaliya. Waxaana Galmudug ku matalayey Mayor-ka Cadaado. Shirkan ayaa waxaa […]
June 27, 2018 June 27, 2018 admin375
Khilaaf xoogan ayaa la xaqiijiyay inuu soo kala dhexgalay Raysal Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Wasiirkiisa Maaliyadda Dr. Cabduraxmaan Ducaale Beyle kaasoo in muddo ah soo jiitamayay. Waxaa jiray warar sheegaya in Beyle uu ashtako ugu tagay Madaxweyne Farmaajo, asagoo ka cabanaaya cadaadiska Reysalwasaaraha. Wixii ka dambeeyay khilaafka Raysal wasaare Khaire iyo Beyle ayaa saraakiil […]